Madaxweynaha oo ka jawaabay mooshinka
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay mooshinka ay ka keeneen xildhibaannada ka tirsan baaarlamanka ee arbacadii loo gudbiyey guddoonka baarlamanka.
Madaxweyne Xasan wuxuu sheegay inaanu jirin waqti lagu billaabo is-qabqabsi cusub oo dhex mara hoggaanka dowladda iyo xildhibaanada.
Xasan Sheekh, waxa kale oo uu ka hadlay xildhibaannada wada mooshinka isaga ka dhanka ah, isagoo sheegay in xildhibaanada la garanayo taariikhda ay ku lee yihiin siyaasadda Soomaaliya, isla markaana aanay Soomaaliya hakin karin.
Jawaabta madaxweynaha ee Mooshinka
Haddaba maxaa lagu macnayn karaa xiisaddan siyaasadeed ee soo cusboonaatay, muxuu mooshinkan salka ku hayaa, halkee ayayna arrintu ku danbeyn doontaa? Arrimahaasi ayay Sahra Ciidle ka wareysatay Afyare Cabdi Cilmi, oo culuunta siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qadar.
Hoos ka dhageyso wareysiga Afyare
Wareysiga Afyare Cabdi Cilmi